HORDHAC : Porto VS Liverpool? Kaga bogo macluumaadka kulankan oo dhameestiran – Gool FM
HORDHAC : Porto VS Liverpool? Kaga bogo macluumaadka kulankan oo dhameestiran
Bashiir April 17, 2019
( Yurub) 17 Abriil 2019. Kooxda liverpool oo guul labo gool iyo waxba ah kaga soo gaartay garoonkeeda kooxda Porto kulankii lugtii hore ee wareega sideed dhamaadka ayaa misane caawa kula bara tami doonta kulanka lugta labaad oo ka dhacaya garoonka Kooxda Porto.
Pepe iyo Hector Herrera ayaa dib ugu soo laabtay kooxdooda kaddib markii ay ganaax ku seegeen kulankii lugtii koowaad oo lagu ciyaaray garoonka Kooxda Liverpool, iyaga oona rajeenaya in safka koowaad ee kulanka ay ka soo muuqdaan.
Porto macalinkooda ayaa qorsheenaya in uu isbadal ku sameeyo weerarkiisa waxa uuna doonayaa in uu door bido adeega xidigiisa Yacine Brahimi si uu uga soo muuqdo weerarka kulanka caawa.
Dhica kale kooxda Liverpool ayaa dib u heleysa Andrew Robertson oo ganaax ku seegay kulankii lugtii hore oo ay ku soo badiyeen labo gool iyo waxba.
Jordan Henderson oo laga saaray qeebtii dambe ee ciyaartii Chelsea kaddib dhaawac fudud oo soo gaaray ayaa kulankan diyaar buuxa u ah waxa uuna qeyb ka yahay ciyaartoyda u safartay Portugal.
Dejan Lovren ayaa laga reebay ciyaartoyda u safartay Portugal taa waxa ay la micno tahay
Joel Matip uu sii wadan doona ka ciyaarista daafaca dhexe.
Kulanka : Porto VS Liverpool? ( Champions League)
Goobta : Estadio do Dragao
Garsoorka : Danny Makkelie (Netherlands)
Xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ka hor kulanka:
Labo kamid ah sedex koox oo lugtii hore la kulmay qasaaro labo gool ama wax ka badan xili ciyaareedkan wareegiisa 16 ka ayaa sameeyey soo laabasho cajiib ah waana kooxaha Manchester United oo ka soo kabatay guul daradii PSG iyo Juventus oo soo laabasho cajiib ah ku sameesay Atletico Madrid.
Liverpool marnaba qasaaro kalama aysan kulmin kukan ka tirsan tartamada yurub Kooxda Porto (4 guul iyo 3 bar-baro) waxa ayna ilaal sanayaa sedex kukan oo xiriir ah oo aan shabaqooda gool laga dhalin.
Porto guul daradii ugu weyneed ee Champions League oo garoonkeeda ku soo gaarta waxa ay kala kulantay Kooxda Liverpool xili ciyaareedkii hore wareega 16 ka kaddib markii ay kaga adkaadeen 5-0.
Tan iyo bilowgii xili ciyareedkii hore Liverpool ayaa badisay seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay Champions League kulamadiisa kala baxa , kaliya waxaa ka badisay kooxda Roma wareega semi-finalka xilli ciyaareedkii hore ciyaar ku dhamaatay (4-2).
kooxda FC Porto ayaa loogu badinayey lugta hore ee Champions League labo gool ama wax ka badan lix jeer, dhamaan lixdaas marna waxa ay isaga harayeen tartanka.
Eeg saxaha macquulka ah ee labada dhinac ay la soo shir tagi karaan:
Tababare Solskjær oo ka hadlay guuldaradii ay xalay kala kulmeen Barcelona, muxuuse ka yiri Messi?
Kaddib goolkii uu xalay ka dhaliyay kooxda Ajax, Ronaldo oo sare u qaaday Rikooradiisa wareega Siddeeda ee tartanka Champions League